I-Expatikazi Dubai-Ingcebiso yabaThengi bamazwe bangaphandle
Isithethi seDubai-Fumana umsebenzi kuMbindi Mpuma
Isikhokelo sokuba ngumqhubi we-Uber e-Dubai naseTeksi Driver
I-Gulf Jobs yamaNdiya
E papashwe ngu Inkampani yeSixeko sase Dubai at January 31, 2018
Umfazi waseDaibhania uxhasa iingcebiso
Expatwoman dubai siyaqesha ngaphakathi UAE. Ngaba ungowasetyhini? Ngaba ujonge ukufumana umsebenzi eDubai njengowasetyhini e-Emirates?. Sibonelela ngesikhokelo esinzulu kubakhenkethi abasetyhini. Sibonelela ngoncedo kubafuna amakhosikazi abafuna umsebenzi kwi-UAE. Ukubonisa ukuba siza ekukhokela ekubeni ungayifumana njani izithuba zemisebenzi. Ngaphantsi kwezo meko, isicelo semisebenzi uze ufumane udliwano-ndlebe kwiDaibha njengowesifazane wase-Dubai.
Ethubeni, ukuba ungumntu obhinqileyo bahlala e Dubai. Kwaye kwangaxeshanye ukukhangela umsebenzi. Singo apha ukukunceda uqalise umsebenzi kwi-UAE. Njengoko kuye kwaphawulwa ukuba amabhinqa exat angamava anamava. Uninzi lwabakhangela ikhondo lokukhangela fumana umsebenzi. Ngokubanzi, ayisiyindoda kwaphela ujonge ukufudukela kwi-United Arab Emirates.
Abathunywa kwilizwe laseGulf baya kufakwa neenkampani zethu. Ungongeza kwakhona i-CV yakho okanye ezinye iinkcukacha zokuqesha UDubai Umsebenzi kunye nokuGaywa kwakhona. Kwelo khonkco abameli bokuqesha ukuthumela imisebenzi yasekhaya enikezela abafuna umsebenzi. Kwinqaku leDubai, ungafumana imisebenzi emininzi. Ukuba uyi-Expatkazi Dubai, jonga kwaye ufunde isikhokelo sethu.
Ukuxela owesifazane waseDaibha ukufumanisa ngakumbi malunga nemisebenzi
Cacisa imisebenzi yaseMaid Dubai. Siye sakwazi Ukubeka ndawonye isikhokelo sokukunceda. Ukuza kuthi ga ngoku, ungayifumana ingqesho kwaye ngokufanelekileyo ilungele iimfuno zakho zophuhliso lomsebenzi. Umphambili, I-Dubai ne-Abu Dhabi zezona zixeko zihle kakhulu e-UAE. Embindini wokuqeshwa koqoqosho lwe-UAE indawo. I-Dubai kunye ne-Abu Dhabi zininzi amathuba omsebenzi kumaNdiya abafudukayo.
Ngeli xesha, Inkqubo yokuqesha yahlukile eYurophu. Zonke ngequbuliso kodwa amazwe asentshona akaqondi yonke into. Wonke umqeshi izakwenza umsebenzi wakho ukukhangela lula kakhulu. Inkampani yethu ngalo mzuzu ukuncedisa bonke abafuna umsebenzi e-Dubai. Silapha ukukunceda ube ngumqeshwa wase-Dubai wase-Expatwoman e-UAE.
Ngeenjongo zokukhangela ikhondo lomsebenzi. Nkampani yase Dubai iqela lokuqasha lisoloko lisitsho. Eyona ibaluleke kakhulu ngaphakathi Ukuqashwa kwe Dubai ukukhumbula. Xa u khangela amathuba emisebenzi e-Dubai. Qinisekisa ukuba uthengisa amava akho kumqeshi. Ukuthetha ngokuqhelekileyo xa ufikelele kudliwano-ndlebe. Kuneke u uzenze ube ngumfundi obalulekileyo kwimarike eMiddle East. Kwinxalenye enkulu, kufuneka ube ngumgqatswa obalulekileyo. Kwaye ukongeza okuxabisekileyo kwinkampani entsha.
Umsebenzi we-Expatwoman eKatar
Hayi kuphela i-Dubai ne-Abu Dhabi. Ibhinqa eliya kumazwe angaphandle lifumana kwakhona umsebenzi eKatar. Ukufumana iYobhi e-Qatar akulula. Ngako oko yakho ingundoqo iindlela zokufumana umsebenzi e-Dubai. Kufanele ukuba kubengcono kakhulu kunokuba ucinga. Ethubeni, inhlanhla yakho yonke imihla ngokuxhomekeke. Kwimo yohlobo lomsebenzi oqeqeshiweyo we-cryptocurrency ukwenza eQatar.
Iinkampani zaseKatar zifuna abasebenzi basebhinqa. Ngaphantsi kwezo meko, uninzi lweenkampani ezifuna ukukhishwa kwabasetyhini. Elinye icandelo lemisebenzi linokwenziwa ngcono ngabafazi. Umzekelo kwiivenkile zegolide ngaphakathi kwiziko ledolophu. Phantse yonke imihla ukukhangela abameli bokuthengisa kwabasetyhini. Lo msebenzi udume kakhulu eQatar ibhinqa elingaphandle. Ngakolunye uhlangothi, unayo kujonga kwiwebhusayithi yomqeshi.
Lo ngowokuqala into ekufuneka uyijongile xa ufuna umsebenzi njengoko iindawo ezikhoyo zidwelisiwe apha kunye neemfuno kunye neenkqubo zesicelo. Iiwebhusayithi zeNkampani eKatar zingakunceda. Oku kuhlaziya ukukhangela kwakho kwaye kunciphisa umngcipheko weempawu zomsebenzi. Ungafumana zonke ulwazi malunga nomsebenzi kunye noqhagamshelwano iinkampani ngokuthe ngqo kumaphepha kaRhulumente.
Yiba ngumfazi ocacileyo kwaye ufune imisebenzi yeDoha
Imisebenzi eDoha yenye yezona zinto zilungele ukuphuma kwamabhinqa. Ngokuqhelekileyo, unokufumana izibonelelo kunye nomsebenzi kwiSixeko saseDoha. Ngaphezulu kwayo yonke Ummandla weGulf uvulelekile kumfazi omtsha wokuphuma. Emveni kweminyaka Dubai City Inkampani. Ngokuqinisekileyo, bancede oomama abaziingcali. Injongo yethu yile kukubeka imisebenzi elungileyo evela eMumbai eDoha, Qatar kuMbindi Mpuma.
Ngenjongo yokukhangela imisebenzi e Doha. Jonga i-look ii-arhente ezinkulu zengqesho eQatar. IDoha sesona sixeko siphambili eQatar. Kwaye indawo kuphela apho unokukhangela umsebenzi njengowasetyhini. KwisiXeko saseDoha, unako Nxibelelana namakhulu abaqeshi. Kwelinye icala, inkampani yethu inokukunceda.
Ngale njongo, Inkampani yaseDubai City inikezela abaviwa ngenkqubo epheleleyo yokuqesha. Sinceda ukuhambisa abafazi kwiDoha City. Silapha ukukunceda ukuba ubekwe eQatar. Kodwa kwakhona fumana ezinye izithuba eMbindi Mpuma nje ngelizwe. Ngenkampani yethu, unokukwenza kwaye ube yi-Expatwoman Dubai.
Sebenzisa inkonzo yethu yokuqasha kwi-intanethi. Ubekwe eQatar kwisixeko saseDoha. Inkampani yethu yokuqesha ibonelela ngamathuba engqesho. Sisoloko sizama ukunceda abafazi abafuna umsebenzi. Ngesi sizathu, sikho ezama ukufumana imisebenzi kwintsimi ngqo kunye ne-MBA. Ngenxa yokuba eKatar kubaluleke gqitha ukuba nemfundo enhle.
Imisebenzi ye-Expatwoman Dubai naseBhareni
Kwelinye icala, ukuba ufuna umsebenzi. Cinga ngeBahrain ekukhangelo lwakho. Kunjalo ngaphezulu kokukhangela imisebenzi ye-Emirates. Wonke umntu wasetyhini unokufumana umsebenzi e-Bahrain. Sekela kuloo, a Owesifazane ovela ngaphandle unokufumana umsebenzi e Bahrain.
Unokuthi ujonge kwiindawo zomsebenzi wasekhaya. Ngaphezu koko, thumela isicelo sakho ku Bayt or Monster. Kwakhona jonga imisebenzi kwi-Embassy e-Bahrain. Nangona oku kunokuba yinyani imisebenzi yophando kwi-UAE nase-Emirates. Mhlawumbi akwanelanga kunjalo jonga i-Bahrain. Ukufumana umsebenzi ofanelekileyo eBahrain kwisiza somsebenzi seAljazeera okanye naziphi na ezinye iindawo zomsebenzi.
Kukho indawo ezinokuthi amazwe angakwazi ukufumana imisebenzi e-UAE. Indlela yokufumana umsebenzi e Dubai ufuna iimpendulo ezifanelekileyo. Kuba xa iindwendwe zifuna umsebenzi kwi-UAE. Zifuna ukuba nolwazi olunzulu. Umzekelo Iingcebiso ze-Dubai zengqesho kunye nezindlela zokuthengisa.
I-Expatwoman Dubai Jobs kunye Networking
Yenza iNkcazo yoMfazi. Sonke siyazi malunga nabasetyhini. Bonke bathabatha kakhulu. Nanini na xa udibana nomnye umfazi. Udinga ukuqalisa ukuthungatha. Kungakhathaliseki ukuba wenza ntoni. Qala ukudala inethiwekhi yokuthumela. Khangela ukuba ngubani owaziyo. Khangela ukuba ngubani onako kukunceda uqeshwe.
Qiniseka ukuba Thetha nabanye ababhinqileyo. Zama ukuhlala ujonga ngaphandle kwebhokisi. Kwelinye icala, jonga owakho ishishini isangqa. Umhlobo wakho osenyongweni unokuzisa amaxabiso. Nini khangela indawo entsha kwiGulf. Kwelinye icala, umntu sele umazi. Ngokuqinisekileyo inokuba uncedo olumangalisayo xa ufuna umsebenzi.
Oyena mntu ubalulekileyo kubomi bakho bobuchwephesha. Ngaba uxabisekile kwi uphando lomsebenzi. Kwakhona, zama ukufumana umntu osebenzayo esele e-UAE. Ezinye zeenkampani ukuqeshwa kumazwe aphesheya. Ke uxhumano kwi-LinkedIn ngokuqinisekileyo kuya kukunceda ufumane umsebenzi.
Ungayifumana njani umsebenzi kwi-UAE njengeNkcazo yoMfazi?
Expatwoman Dubai uthatha umsebenzi e-Dubai
Into enzima kakhulu ukufikelela abaqashi. Kufuneka ube nomdla kuyo Imisebenzi yaseMzantsi Afrika e Dubai. Kungenxa yokuba abanye babalawuli bokuqesha eMzantsi Afrika baqesha kumazwe aphesheya. Ngubani onokufumana inombolo yefowuni efanelekileyo kuye Abaphathi babasebenzi?. Okanye idilesi ye-imeyile yomntu anokuqesha. Kananjalo okuhle kakhulu. Ukufumana umntu ophethe ukugaya. Kananjalo ukuba unako Dlulisela i-CV yakho kumntu ofanelekileyo. Kwaye beka igama elilungileyo egameni lakho.
Expatwoman Dubai ngoku unokufumana umsebenzi eMbindi Mpuma. Yethu nkampani ukunceda abathengi bafumane imisebenzi kunye nenkampani yethu. Ukuba ufuna umsebenzi ngaphakathi Emirates unako ngokulula yisa i-CV yakho kwiqela lethu leenkampani zeDubai Airpot. Ngapha koko, unokunxibelelana nabanye abafuna umsebenzi kwaye banokukunceda. Khumbula ukuba kwanamacebiso alula anokutshintsha indlela ocinga ngayo.
I-Dubai City Inkampani eseyenzile ngoku Iingcebiso zokufudukela kumfazi wesifazana. Esi sikhokelo sigqibeleleyo sokuba ngabafuduki abatsha, kuya kufuneka ufumane umbono ocacileyo wokuba ubekwe njani eDubai. Inkampani yethu ikwanceda ukufikelela kwezo njongo. Umsebenzi imarike ye-Expatkazi Dubai iyakhula.
Ubuthi obubizela abaqeshi base Dubai
Kubalulekile ukuqaphela ukufumana igama lomqeshi. Zama ukufumana ulwazi ngakumbi malunga nale nkampani. Ngapha koko, zama ukufumana iinombolo zomnxeba ezifanelekileyo. Xa ufowunela abaqeshi. Zama ukungathethi nto ngamava akho amabi. Ngapha koko, ima namava akho xa ubiza baqeshi e Dubai. Xa ubiza kwiinkampani.
Injongo yakho kukuthetha umqeshi oqeshe umsebenzi emsebenzini. Yiba ngokwahlukileyo kwabanye abafuna umsebenzi. Ukuba nobuhlobo asiyondlela yokuphumelela. Kuya kufuneka ube nobungcali kakhulu. Kwaye bukhali njengeshishini umlawuli.
zama Ukunxibelelana nomphathi weHR ngaphakathi kwifemu. Kwaye kwangaxeshanye ungavumeli umntu ukuba akukhombise kude. Unale nto engqondweni. ukubiza umphathi wokuqasha. Ungaze ube ngumsebenzi olula ukwenza. Kodwa kwelinye icala, iyasebenza xa uthetha kwaye uthumela i-CV. Ingakumbi emntwini ukuba nguwe bangathanda ukuthonya. Uya kukhunjulwa xa amazwe akho e-CV ebhokisini lakho lebhokisi.
Ukuthetha ubuso ngobuso kunye nomphathi wokugaya abasebenzi. Iya kukunika ithuba elifanelekileyo. Ngokubanzi ukuthetha ukwenza ithambeka lokuthengisa. Kwaye ukuyichukumisa kakuhle kubaphathi abaqeshiweyo. Expatwoman Dubai enethuba elihle lokuqeshwa.
Amaziko okuThengisa e-United Arab Emirates
Ngecala elihle Nkampani zase Dubai. Kwaye ukuqesha arhente zokuqesha. Ngokubanzi, ukuqasha abantu basetyhini. Iiarhente zokugaya abasebenzi kwi-UAE. Ukukhangela msebenzi wehlabathi kwi-fowuni. Ukufumana abagqatswa abafanelekileyo. Kwaye i I-Emirates ye-7th yeyona ndawo intle ngalo nto.
Ukukhangela kwabasetyhini abafuna iDubai emangalisayo. Ezinye zezikhundla zifuna kuphela ukubanjwa kwabasetyhini. Umlindi okanye ulawulo lwehotele. Bonke bayakhangela ngaphezulu Uxeshanye umfazi wase Dubai. Kwaye silapha ukukunceda.
Umzekelo kumbindi osempuma. Abasetyhini bahlala rhoqo bengabaphathi. Unokucinga ukuba ayimisebenzi ephezulu ehlawulwe ngabafazi. Imisebenzi ebonelelwa ngolawulo lwabadala. Kwizikhundla zolawulo. Ngoku ziya zithandwa ngakumbi kwi IUnited Arab Emirates.
Kulungile i-arhente ye-Emirate ekhangela abagqatswa abatsha. Omnye wemizekelo yi-Expo 2020 eDubai. Imakethi yadala uluhlu lwabagqatswa. Ngokukodwa kwiinkampani ezifuna kwakhona i2020. Nditsho I-Google e Dubai iqesha.
Zilumkele izithuba zomsebenzi ezifumana umvuzo uphantsi eDubai. Ngokubanzi isiXeko saseDubai. Ukuba nesalamane kulwaphulo-mthetho oluphantsi. Ayitsho ukuba ungatyunyuzwa. Uhlala ungumntu ohlawula kakuhle. Eminye yemisebenzi ihlawulwa kancinci. Umzekelo wabasebenzi abasandul 'ukufumana izidanga. Ungayilindelanga ingeniso ephezulu umzekelo kwimisebenzi eSaudi Arabia. Kufuneka ukhumbule ukuba abanye babaqeshi. Yenza amathuba ebantwini. Akukho semthethweni kwiarhente yokuqesha ukuba ikuhlawule imali ukufumana umsebenzi ku-UAE.
Amagosa okuqesha abafazi basemzini
Abaqeshisi kunye nabaphathi kumqeshi. Unokukhuthaza umntu ngamnye. Umsebenzi wabo kukubeka. Kubaphathi bokugaywa, akukho mehluko. Ukuba ungumfazi okanye indoda. Ukuqesha abaphathi benza imali kwi umgqatswa ophumeleleyo. Ulawulo lokuqesha liqeshwe ziinkampani eziphambili. Kwelinye icala, awusoze uqeshiwe ngabantu. Kuphela ngabaphathi bamashishini ngaphakathi kwenkampani. Kwakhona, fumana indawo yokusebenza kunye neenkonzo. Kwaye uqhagamshele kubaphathi bokuqesha eDubai.
Eyona misebenzi iphambili kubaqeqeshi abanamava. Ngokwesiqhelo ukuthengisa kukuthengisa kwinkampani. Ukungathengisi inkampani kuwe. Qiniseka ukuba uyazi into onokuyenza ngokwentengiso yakhe. Zininzi iindlela zokufumana ukuqesha abaphathi kwi-Dubai. Kakade ke, abaqashi banomdla kuphela kubafundi abaqeqeshwa kakhulu.
Ke esona sigqibo sigqibeleleyo onokusenza. Kukuba ungene kumgibe wokuhlawula ikhomishini ngomsebenzi. Umzekelo, Inkampani yethu inokukunceda ufumane umsebenzi. Kodwa asinakukunikeza ithuba lomsebenzi. Sinceda kuphela ngexesha lenkqubo yokuqesha. Eyona ndlela ifanelekileyo kukufumana igosa elisebenzayo elifanelekileyo lemisebenzi yokufumana amathuba emisebenzi. Nangona oku kunokuba yinyani. Ngokwenyani, xa ii-expats zigqibile ukwenza isicelo somsebenzi. Kufuneka ubizelwe udliwanondlebe. Emveni kwakho konke ayinguye wonke umntu ofuna umsebenzi ozokufumana umsebenzi eDubai. Abanye babagxothi babuyela ekhaya.
Ngokomzekelo abanye abafuna umsebenzi wabasetyhini. Ukuhlala phesheya kunye nokubonisa. Abanye be Abafazi basemzini base-Indiya bafumana umsebenzi nge-Dubai City Inkampani. Ngaphantsi kwezo meko, ukuba ujonga ukuba ngumama-ntokazi eDubai. Kodwa okwangoku, uhlala phesheya. Unga Sebenzisa inkampani yethu xa ufuna umsebenzi.
Udliwano-ndlebe lwase Dubai
Ngokuqinisekileyo, iinkampani zaseDubai zezinye eziphambili. Ukufumana ngumphathi weHR ukuba aphonononge isicelo sakho somsebenzi. Ngamazwi ambalwa kuthatha ixesha elininzi. Ingakumbi kwi-UAE. Mhlawumbi ngaphezulu kweenyanga ze-6. Ukuba namava awaneleyo kudliwanondlebe kumashishini aliqela. Kufuneka ube Amava aneleyo kumsebenzi wehotele. Ngakolunye uhlangothi, kufuneka ulandele umgaqo-nkqubo wokuqesha ngokukhawuleza.
Zama ukwenza impembelelo efanelekileyo kwiCV yakho. Ngelo xesha, kufuneka ufikelele udliwano-ndlebe olulungiselelwe. Uhlala uyenza ingcinga yakho yokuqala. Ngokukodwa umsebenzi webhanki e-Dubai Enye yezinto ekufuneka uzikhumbule. Xa inkampani ekugqibeleni ukumema udliwanondlebe. Ngokuqinisekileyo, kuya kufuneka uzise ikopi ehlaziyiweyo ye-Resume yakho. Ngokunikwa la manqaku, umbono olungileyo. Kukuza neeleta zoncomelo ezivela kubaqeshi bakho bangaphambili.
Ngexesha elide kufuneka ukhangele iinkcukacha zakho zengqesho. Njalo khangela i-CV yakho yemisebenzi yokuthengisa. Qinisekisa ukuba onke amaxwebhu eniwazisa kubaqeshi. Yiba ngenye yezona zinto zilungileyo kwaye zihanjiswe kakuhle ngaphandle kweefayile zegrama. Qinisekisa ukuba unamaxwebhu onke kwi-suitcase efanelekileyo okanye kwifolda emnyama emnandi. Ngenxa yokuhamba kunye nokuphatha amaxwebhu ngokubukeka kakubi. Ukwenza ubonakale ungcolile kwaye ungakulungeleli iNdliwano-ndlebe.
Inkambiso yokugqoka kunye nodliwano-ndlebe kwintombikazi e-Dubai
Ukudibene neminyaka yamava. Kufuneka ukwazi oko uhambayo ukuba ugqoke kwi-interview-in interview. Kwicala elifanelekileyo zama ukunciphisa inqanaba loxinzelelo ekuseni kudliwano-ndlebe. Kufuneka uyazi. Le Dubai yidolophu yenkcubeko yama-Arabhu. Urhulumente we-UAE babe nezithintelo ezingqongqo ngokubhekisele kwindlela abaza kunxiba ngayo abafazi.
The Abafuna umsebenzi wase Pakistani e-UAE uyakwazi ukwenza izinto kwilizwe lamaSilamsi. Ibhinqa laseDubai lineekhowudi zokunxiba ezithintelwe ngokupheleleyo. Ngakolunye uhlangothi, abafazi baseYurophu nabaseMelika banjalo bamkelekile ukusebenzisa isinxibo sabo senkcubeko. Kodwa ukusukela ekubeni ungumhlali wase-Expatkazi Dubai. Uya kuyazi indlela yenkcubeko yama-Arabhu.
Umzekelo eDubai, akulunganga ukunxiba ukubonisa isinxibo. Ibhinqa linokubonakala ngathi li-sexy phantse kulo naluphi na uhlobo lwesuti yeshishini. Kwaye oku kufaneleke kakhulu kwi-Emirates. Unokujongwa indlela yokugqoka e-Dubai?.
Eyona nto ibaluleke kakhulu kunazo zonke kunye neyona ndlela elula kwiqabanekazi lase Dubai
Kukho nemisebenzi enzima kunazo zonke ebesetyhini. Umzekelo umsebenzi wezimoto kubafazi base Dubai. Kuqinileyo ukufumana. Cinga nje ukuba uya kuthenga iPorsche entsha. Uninzi lwabantu bacinga ukuba umthengisi uza kuza kwaye akumeme. Nangona kunjalo, ukuba loo nto ibhinqa kwi-UAE. Mhlawumbi into emdaka, ingenxa yenkcubeko.
Ngakolunye uhlangothi, umsebenzi olula kumfazi. Ngokuqhelekileyo kuthetha ukuqalisa umsebenzi njengomfundisi. Izithuba zomsebenzi zomsebenzi zootishala zivulelekile kubafazi ababhinqileyo. Kubonakala mihla le njengoko Indian ukufundisa kwabafazi ezikolweni. Kwaye uninzi lwe kids yabathanda. Uninzi lwabaphandle bayayazi loo nto I-Dubayi yindawo engcono kakhulu yabasebenzi. Ngoko kukho imisebenzi emihle nemisebenzi emibi ye-Expatwoman e-UAE.
Expatwoman Dubai - Siqeshisa
Ngoku sinceda uMama ukuba athathe msebenzi e Dubai
Ukulayisha nje uqale kwakhona kwaye uqale Umsebenzi omtsha e-UAE njenge-Expatwoman. Nathi sinjalo ukuqesha abafudumi basePhilippines e-Dubai.
Layisha kwakhona kwiSixeko esakhawulezayo esakhulayo emhlabeni! - Expatwoman Dubai iqala namhlanje !.